Inguquko Yesithathu Yezimboni: Iyini, ukusungulwa kwayo nokuthi iqale nini | Ezezimali Zomnotho
Inguquko yesithathu yezimboni
UClaudi Casal | | Umnotho jikelele
Njengoba iningi lethu selivele lazi, umlando uphawuleka ngemicimbi eyahlukene emele ushintsho emikhakheni eminingi yezenhlalo, amasiko, ezomnotho nezobuchwepheshe. Isibonelo, inguquko yezimboni, ingenye yezinto ezaziwa kakhulu. Ukwethulwa kwemishini esindayo eyenzelwe ukukhiqizwa ngobuningi, amafektri nenjini ye-steam yizinto zokuqala eza engqondweni. Noma kunjalo, Sekuhlonishwe izinguquko ezintathu zezimboni, ngasinye sinoshintsho lwaso kwezobuchwepheshe, ingqalasizinda kanye nezimakethe. Eqinisweni, uguquko lwesithathu lwezimboni alukapheli.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngokuthi yini inguquko yesithathu yezimboni, ukuthi yaqala nini nezinguquko esezikwenzile. Ngaphandle kokungabaza kuyisihloko esithakazelisa kakhulu futhi Kulula ukuzazisa ukuze uqonde kangcono imakethe kanye nemakethe yamasheya.
1 Luyini uguquko lwesithathu lwezimboni?
1.1 Yikuphi ukusungulwa okubaluleke kakhulu kwenguquko yesithathu yezimboni?
2 Kwenzeka nini inguquko yesithathu yezimboni?
3 Ukuhwebelana kwembulunga yonke
Luyini uguquko lwesithathu lwezimboni?
Eyaziwa nangokuthi inguquko yezobunhloli (i-RCT) noma inguquko yesithathu kwezesayensi nezobuchwepheshe, inguquko yesithathu yezimboni imele umqondo ovunyelwe yiPhalamende laseYurophu ngoJuni 2007. Kuguquko lwezomnotho lapho izinhlelo ezintsha zamandla zihlangana nobuchwepheshe obusha bokuxhumana.
Lezi zindlela ezintsha zokuxhumana zigcina ziyizindlela zokuphatha nokuhleleka impucuko ezenze zabonga ngenxa yemithombo emisha yamandla. Kulokhu esikhuluma ngakho inyunyana phakathi kobuchwepheshe bezokuxhumana nge-Intanethi namandla avuselelekayo ekhulu lama-XNUMX, okudala ushintsho olubizwa ngelezimboni lwesithathu.
Yikuphi ukusungulwa okubaluleke kakhulu kwenguquko yesithathu yezimboni?
Kunezinto eziningi ezisunguliwe ezivela ekuguqulweni kwesithathu kwezimboni, kokunye okusunguliwe, imibono nobuchwepheshe obuthile. Kungumjikelezo ongapheli lapho ukutholwa ngakunye kuholela ezinkulungwaneni ezengeziwe. Ijubane umuntu akhula ngalo liyamangaza. Phakathi kokusungulwa okuningi kwenguquko yesithathu yezimboni lezi zinto ezintathu zigqame ikakhulukazi:
Fibre yokukhanya: Kuyinto yokudlulisa evame ukusetshenziswa kumanethiwekhi wedatha.
Ukuqamba okusha kuNanotechnology
I-fiberglass: Kuyinto esetshenziswa kabanzi namuhla emikhiqizweni ehlukahlukene yezimboni.
Ngenxa yalokhu kusungulwa nezinto zokwakha, kuye kwenziwa amadivayisi amaningi abalulekile kagesi. lokho kuyingxenye yosuku lwethu usuku nosuku. Futhi hhayi lokho kuphela, kepha ngaso sonke isikhathi lapho sikwazi ukuhambisa nokudlulisa idatha ngendlela esheshayo nephumelelayo. Ngisho nokugcinwa kwayo kwenziwa ngamadivayisi amancane namancane.
Kwenzeka nini inguquko yesithathu yezimboni?
Njengoba ungalindela, kube nezinguquko ezimbili zezimboni ngaphambi kokwenzeka kwesithathu. Ngesikhathi sokuqala, imakethe yemvelo kwakuyimindeni emikhulu nazo zonke izidingo zayo. Ngakho-ke, isisekelo sebhizinisi eliphumelelayo kwaba ukukhiqizwa kwe-serial. Lokho kusho ukuthi: Ukukhiqizwa kwevolumu enkulu ngokuhlukahluka okuncishisiwe. Ake sibone idatha ebalulekile kusukela manje:
Iminyaka: I-1760 ine-1870.
Izwe elihola phambili: England
Ingqalasizinda yesici: Ukuzula neziteshi.
Ubuchwepheshe besici: Amathuluzi omshini, imishini yendwangu nakho konke okwenzekayo ngenxa yezinjini zesitimu.
Isikhungo somnotho: Ibhizinisi elincane neliphakathi.
Kwabe sekufika inguquko yesibili yezimboni. Kuwo, umqondo womndeni ushintshile futhi izinhlangano zibuke umndeni wenuzi njengemakethe yawo yemvelo. Le yimininingwane okufanele uyiqokomise:
Iminyaka: I-1870 ine-1970.
Izwe elihola phambili: United States
Ingqalasizinda yesici: Ama-Steamboats, ama-telegraph, izingcingo, kanye nesitimela.
Ubuchwepheshe besici: Injini yokusha, ukukhiqizwa komkhiqizo wamakhemikhali nemishini kagesi.
Ibhizinisi elincane neliphakathi liba entweni yokusekela izinkampani ezinkulu.
Ekugcineni kukhona inguquko yesithathu yezimboni. Kule nkathi, ukugxila ekugxileni kungumuntu ngamunye, okwenza imakethe yemvelo ihlukaniswe kakhulu futhi ikhethekile. Amabhizinisi anikela ngemikhiqizo nezinsizakalo ezahlukahlukene, futhi amaqoqo wokukhiqiza mancane kakhulu. Lapha sinezici ezibaluleke kakhulu:
Amazwe aholayo: Japan, United States kanye namazwe aseYurophu.
Ingqalasizinda yesici: Izinhlelo zokuhamba ngobuningi, ezokuxhumana ngocingo kanye namanethiwekhi.
Ubuchwepheshe besici: Ubuchwepheshe bolwazi, ukuphathwa kolwazi nokukhula kwezinkampani ze-microelectronics nezinsizakalo.
Amabhizinisi amancane naphakathi nendawo abalulekile ukuze zonke izinhlelo zisebenze.
Ukuhwebelana kwembulunga yonke
Ukuhwebelana kwembulunga yonke kubalulekile ekuguqukeni kwesithathu kwezimboni. Ngenxa yobuchwepheshe obusha, imakethe ivulekele wonke umuntu ngenethiwekhi engenamkhawulo ngokwendawo. Ngokufika kwe-intanethi, izithiyo azisekho futhi abantu bayakwazi ukweqa kusuka kubunikazi bendawo noma besifunda baye enkambisweni yamasiko amaningi noma emhlabeni jikelele.
Futhi isithembiso semisebenzi emisha siyagcwaliseka ngenxa yobudala bedijithali. Ukusebenza komsebenzi kwenziwa lula ukuvela kwamapulatifomu aku-inthanethi akhethekile ngokuxhumana nabasebenza ngokuzimela. Kodwa-ke, zona zisongela ubukhona besandla sokwenza i-oba. Izinkampani eziningi ngokwengeziwe zikhetha ukwenza izinqubo ezithile zokukhiqiza zishintshe ngenkathi abasebenzi babo babantu bekhethelwe emisebenzini eminingi yezengqondo. Ngakho-ke, ngenkathi idala imisebenzi emisha ngakolunye uhlangothi, ibhubhisa imisebenzi yakudala ngakolunye uhlangothi.
Izinguquko ezisebenza kunguquko yesithathu yezimboni kufanele zithuthuke ngokushesha. Uma omunye ewela ngemuva, bonke abanye bazohlupheka. Enye yezinkinga ezigqame kakhulu ukunyamalala kwemisebenzi eminingi, njengoba kunjalo nangendlela abantu ababhekana ngayo nale nkinga yokungasebenzi. Kuzoba nzima kakhulu kuyo yonke imiphakathi ukwenza ushintsho kusuka kumodeli yezomnotho ebilokhu iqhubeka iminyaka eminingi kangaka.
Kusekhona ukungabaza okuningi mayelana nezinguquko ezivelayo emhlabeni jikelele. Izwe ngalinye kufanele lihleleke ngokwalo ukuze lingasali emuva ezingeni lobuchwepheshe, kepha kusenabaningi ababhekene nezinkinga ezavela emakhulwini eminyaka adlule. Lesi simo siyakhathaza kakhulu njengoba singakhuphula ukungalingani. Umhlaba womuntu kumele unake ukuxazulula zonke izinkinga ezizokuza ngokuqiniseka okukhulu ngenguquko yesithathu yezimboni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Inguquko yesithathu yezimboni
UMarcelino Romas kusho
Ngavula inkampani yasolwandle ePanama futhi ngale ndlela ngikwazile ukuvikela imali yami kuleyo ndawo yentela. Ngijabule kakhulu ngalokhu kufezekiswa kwesikhwama sami esiphuthumayo, ngaphandle kokuthi imali yami yehliswe isithunzi.
Phendula uMarcelino Romas